I-China Cryogenic oxygen plant ibiza abakhiqizi bezitshalo zomoya-mpilo nabaphakeli | NOMA
1: Umgomo wokwakhiwa kwalesi sitshalo ukuqinisekisa ukuphepha, ukonga ugesi nokusebenza okulula nokugcinwa. Ubuchwepheshe buhamba phambili emhlabeni.
A: Umthengi udinga ukukhiqizwa okuningi ketshezi, ngakho-ke sinikezela ngenqubo yokufaka umoya ophakathi kabusha ukonga ukonga nokusebenzisa amandla.
B: Sisebenzisa kabusha i-air compressor nesilingo esiphakeme, esiphansi. inqubo yokwandisa ukonga ukusetshenziswa kwamandla.
2: Yamukela ubuchwepheshe be-DCS bokulawula ikhompyutha ukulawula iphaneli enkulu, iphaneli lendawo ngasikhathi sinye. Lolu hlelo lungaqapha yonke inqubo yesitshalo.
Isitshalo sokuhlukanisa umoya sincike ezindaweni ezihlukene zokubilisa zezinto ngayinye esemoyeni. Umoya okokuqala ucindezelwe, upholile, futhi kususwe i-H2O ne-CO2. Ngemuva kokupholisa esilinganisweni sokushisa okucindezelayo okuphakathi kuze kufinyelele kuzinga lokushisa, iyalungisa kukholamu ukuthola i-oxygen engamanzi ne-nitrogen engamanzi.
Lesi sitshalo i-sieve yamangqamuzana ehlanza umoya ngenqubo ye-turbo expander.
Ngemuva kokususwa uthuli nokungcola kwemishini kusihlungi somoya, umoya ongahluziwe uya ku-air turbine compressor ukucindezela umoya ku-1.1MpaA, bese upholile kuze kube ngu-10 ℃ ophikweni lokupholisa umoya. Ngemuva kwalokho ingena kokunye okusetshenziswayo kwe-molecular sieve absorber ukususa i-H2O, CO2, C2H2. Umoya ohlanzekile ucindezelwa yi-expander bese ungena ebhokisini elibandayo. Umoya wemishini ungahlukaniswa ngezigaba ezi-2. Ngemuva kokupholisa kube ngu-256K, isigaba esisodwa sikhishwa kuyunithi lokuqandisa elingu-243K, bese lipholiswa ngokuqhubekayo endaweni enkulu yokushisa. Umoya opholile uzodonselwa ku-expander, kuthi ingxenye yomoya onwetshiwe ingene esikhumulweni esikhulu sokushisa ukuze iphinde ifudumeze, bese iphuma ebhokisini elibandayo. Futhi ezinye izingxenye ziya kukholamu engenhla. Esinye isigaba sipholile ngokugeleza kokuphikiswa, bese siya kukholamu ephansi ngemuva kokunwetshwa.
Ngemuva kokuthi umoya ulungisiwe ngokuyinhloko, singathola umoya owuketshezi, imfucuza i-nitrogen engamanzi ne-nitrogen engamanzi ehlanzekile kukholamu ephansi. Umoya owuketshezi, udoti oketshezi i-nitrogen kanye ne-nitrogen engamanzi emsulwa emunxwe kukholamu ephansi iya kukholamu ephezulu ngemuva kokuba selehlile uketshezi kanye ne-liquid nitrogen epholile. Ngemuva kokulungiswa kukholamu engenhla, singathola i-99.6% yobumsulwa be-oxygen engaphansi kwekholomu engenhla, iphuma njengomkhiqizo. Ingxenye ye-nitrogen emunceke ukusuka phezulu kwekholomu yokusiza iphuma ebhokisini elibandayo njengomkhiqizo.
Imfucumfucu ye-nitrogen edonswa phezulu kwekholomu engenhla iyaphuma ebhokisini elibandayo ngemuva kokuvuselelwa yisibambisi esipholile nesikhulu sokushisa. Ingxenye yayo emunceke, iya ohlelweni lokuhlanzwa lwe-molecular njengomthombo womoya ozivuselelayo. Abanye bakhishwa.
Langaphambilini Isitshalo se-Cryogenic medium size liquid oxygen oxygen Plant Liquid Nitrogen Plant
Olandelayo: Uhlobo lwe-Cryogenic oluphakeme kakhulu lokuhlanzeka okuphezulu kwe-nitrogen emoyeni ukwahlukaniswa kwesitshalo se-liquid ne-oxygen generator
I-Industria Liquid Nitrogen Generator
Izinsiza kusebenza ze-Industria Liquid Nitrogen Generator
Isitshalo Sokukhiqiza iNitrogen
I-90% -99.9999% Ukuhlanzeka namandla amakhulu we-PSA Nitr ...